ETshayina uMgangatho oPhakamileyo oLukiweyo oLukiweyo oKhawulezayo ngokweSiko leZip ePheleleyo eMidlalo yeNayiloni yeTracksuit iseti yaBasetyhini umzi-mveliso kunye nabavelisi |AIKA
Siza kuzinikela ekunikezeni abathengi bethu ababekekileyo sisebenzisa ezona nkonzo zicingayo ngomdlaIsinxibo esingenamthungo seGym , Yoga Singlets , I-High Waisted Legging, Ukuba unemfuno malunga nayo nayiphi na into yethu, qiniseka ukuba usitsalele umnxeba ngoku.Sifuna ukuva kuwe kungekudala.
Umgangatho oPhezulu oLukiweyo oLukiweyo oKhawulezayo weZip ePheleleyo eMidlalo yeNylon yeTracksuit iseti yeNkcukacha yabaseTyhini:
Sinale motto engqondweni, siye saba phakathi kwabona bavelisi beteknoloji, abaxabisa kakhulu, kunye nabakhuphisana ngexabiso kuMgangatho oPhezulu oKhawulezayo owomileyo oLukiweyo oLukiweyo oQelekileyo weMidlalo yeNayiloni yeTracksuit yabasetyhini, Imveliso iya kubonelela bonke. kwihlabathi jikelele, njenge: Ecuador, Latvia, Houston, Siyakwamkela ukuba undwendwele inkampani yethu, umzi-mveliso kunye negumbi lethu lokubonisa iimveliso ezahlukeneyo eziya kuhlangabezana nolindelo lwakho, okwangoku, kufanelekile ukutyelela iwebhusayithi yethu, abasebenzi bethu bokuthengisa baya kuzama iinzame zokukunika eyona nkonzo ingcono.Ukuba ufuna inkcazelo engakumbi, nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi nge-E-mail okanye ngomnxeba.
Eli shishini kushishino lomelele kwaye liyakhuphisana, liqhubela phambili namaxesha kwaye liphuhlise ukuzinzileyo, siyavuya kakhulu ukuba sibe nethuba lokusebenzisana! NguMichelle wase-Austria - 2018.12.28 15:18
Umphathi wentengiso unomonde kakhulu, sanxibelelana malunga neentsuku ezintathu ngaphambi kokuba sigqibe ekubeni sisebenzisane, ekugqibeleni, sanelisekile kakhulu ngale ntsebenziswano! NguMarguerite waseGuatemala - 2018.08.12 12:27
I-OEM yesiko loYilo olutsha lweZiphu eLondolozayo Ukhululekile ...
2020 Uyilo lweFashoni yaseNtwasahlobo eNtsha yePokotho yesiko Pu...
Ibhendi yesiNtu esiQhelekileyo esiElastic esiLungileyo esiLungileyo soMqhaphu...
Uyilo lweFashoni uMbala oPhethekileyo oLukwayo ...
IGym Cott yoMgangatho oPhakamileyo wokuLwa ukuPilisiswa kwabasetyhini...
Isityalo sePolyester yePolyester yoMqhaphu oPhakamileyo oPhezulu J...
Iisuti zomzimba ezikumgangatho ophezulu ezenzelwe wena amantombazana amnandi ...
Intengiso eshushu I-Pilling ye-Cotton Polyester Sweatsuit ...
I-Tracksuit yamanenekazi amatsha eFashini amaqhekeza amabini amafutshane ...
Ukomelela okuNtsha koBume boBulunga baMaqhekeza amaBini eSiko loLondolozo...